စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ဆန္ဒအရ ဂျူဗင်တပ် ခေါ်ယူပေးမယ့် ရီးရဲကစားသမား (၃) ယောက် ။ •
14/06/2019 KPST အားကစား 0
ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင် ကြယ်ပွင့် စီရော်နယ်ဒိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီက ရီးရဲကနေ ဂျူဗင်တပ် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်ဒိုဟာ ရီးရဲမှာ (၉) နှစ်ကြာ ကစားလာခဲ့သူဖြစ်လို့ ရီးရဲကစားသမား တော်တော်များများနဲ့ အလွန်သံယောဇဉ် ဖြစ်နေသူပါ။ စီရော်နယ်ဒိုဟာ ရီးရဲကစားသမားတချို့ကို ဂျူဗင်တပ်အသင်းထံ ခေါ်ယူပေးဖို့ တောင်းဆိုထားကြောင်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ ဆန္ဒအရ ဂျူဗင်တပ်တို့ ခေါ်ယူပေးမယ့် ရီးရဲကစားသမား (၃) ယောက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
၁. ဂျိမ်းရိုဒရီဂွတ်ဇ် ။
ဂျိမ်းရိုဒရီဂွတ်ဇ်ဟာ လက်ရှိရီးရဲ နည်းပြဇီဒန်းနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်နေသူပါ။ ဘိုင်ယန်ကလည်း သူ့ကိုအပြီးသတ်ခေါ်ယူမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထုတ်ပြန်ထားခဲ့လို့ ဂျိမ်းရိုဒရီဂွတ်ဇ်ဟာ ဒီနွေမှာ အသင်းသစ်တစ်သင်းကို သေချာပေါက် ပြောင်းရွှေ့ရမယ့်ကစားသမားပါ။
စီရော်နယ်ဒိုနဲ့ ဂျိမ်းရိုဒရီဂွတ်ဇ်တို့ဟာ ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိပြီး ရီးရဲမှာတုန်းက အတွဲညီညီ ကစားလာခဲ့သူတွေပါ။ အထူးသဖြင့် စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ အထာကို ဂျိမ်းရိုဒရီဂွတ်ဇ်က ကောင်းကောင်းသိသူဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စကိုဟာလည်း ရီးရဲကနေ ထွက်ခွာချင်တယ်လို့ လေသံပစ်ထားသူပါ။ ရီးရဲက အပြောင်းအရွှေ့မှာ ကစားသမားသစ် အမြောက်အမြားခေါ်ယူဖို့ရှိလို့ အစ္စကိုဟာ ပုံမှန်နေရာရဖို့ မသေချာတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဂျူဗင်တပ်အသင်းအနေနဲ့ ရီးရဲလိုချင်တဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးသာပေးမယ်ဆိုရင် အစ္စကိုကို ရနိုင်ပါတယ်။
၃. မာဆယ်လို ။
မီဒီယာတွေထက်မှာ စီရော်နယ်ဒိုကိုယ်တိုင် ခေါ်ယူပေးဖို့ လူသိရှင်ကြား တောင်းဆိုထားတဲ့ ကစားသမားပါ။ စီရော်နယ်ဒိုနဲ့ မာဆယ်လိုကြားက ဆက်ဆံရေးကတော့ ပြောစရာမလိုအောင် အားလုံး သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ မာဆယ်လိုက လက်ရှိရီးရဲရဲ့ အခြေအနေကို ငြီးငွေ့စပြုနေပြီဖြစ်လို့လည်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မာဆယ်လိုတစ်ယေက် စီရော်နယ်ဒိုရှိရာတူရင်ကို လိုက်လာမလား ဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
ဒီကစားသမား (၃) ယောက်စလုံးက စိရော်နယ်ဒိုရဲ့အထာကို ကောင်းကောင်းသိပြီး စီရော်ယ်ဒိုနဲ့ အတွဲညီတဲ့ကစားသမားတွေပါ။ ဒါကြောင့် ဒီကစားသမားတွေကိုသာ ခေါ်နိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဂျူဗင်တပ်အသင်းနဲ့ မျှော်မှန်းထားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ရယူနိုင်ဖို့ အလားအလာ ကောင်းနေပါတယ်။
စီရျောနယျဒိုရဲ့ဆန်ဒအရ ဂြူဗငျတပျ ချေါယူပေးမယျ့ ရီးရဲကစားသမား (၃) ယောကျ ။
ပျေါတူဂီ လကျရှေးစငျ ကွယျပှငျ့ စီရျောနယျဒိုဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှရောသီက ရီးရဲကနေ ဂြူဗငျတပျ အသငျးကို ပွောငျးရှေ့ သှားခဲ့ပါတယျ။ စီရျောနယျဒိုဟာ ရီးရဲမှာ (၉) နှဈကွာ ကစားလာခဲ့ သူဖွဈလို့ ရီးရဲကစားသမား တျောတျော မြားမြားနဲ့ အလှနျသံယောဇဉျ ဖွဈနသေူပါ။ စီရျောနယျဒိုဟာ ရီးရဲ ကစားသမားတခြို့ကို ဂြူဗငျတပျ အသငျးထံ ချေါယူပေးဖို့ တောငျးဆို ထားကွောငျး သတငျးတှေ ထှကျပျေါနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စီရျောနယျဒိုရဲ့ ဆန်ဒအရ ဂြူဗငျတပျတို့ ချေါယူပေးမယျ့ ရီးရဲကစားသမား (၃) ယောကျကို ဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
၁. ဂြိမျးရိုဒရီဂှတျဇျ ။
ဂြိမျးရိုဒရီဂှတျဇျဟာ လကျရှိရီးရဲ နညျးပွဇီဒနျးနဲ့ အဆငျမပွေ ဖွဈနသေူပါ။ ဘိုငျယနျကလညျး သူ့ကိုအပွီးသတျ ချေါယူမှာ မဟုတျဘူးလို့ ထုတျပွနျ ထားခဲ့လို့ ဂြိမျးရိုဒရီဂှတျဇျဟာ ဒီနှမှော အသငျးသဈတဈသငျးကို သခြောပေါကျ ပွောငျးရှရေ့မယျ့ ကစားသမားပါ။
စီရျောနယျဒိုနဲ့ ဂြိမျးရိုဒရီဂှတျဇျတို့ဟာ ရငျးနှီးတဲ့ ဆကျဆံရေးရှိပွီး ရီးရဲမှာတုနျးက အတှဲညီညီ ကစားလာခဲ့သူတှပေါ။ အထူးသဖွငျ့ စီရျောနယျဒိုရဲ့ အထာကို ဂြိမျးရိုဒရီဂှတျဇျက ကောငျးကောငျး သိသူဖွဈပါတယျ။
အစ်စကိုဟာလညျး ရီးရဲကနေ ထှကျခှာ ခငျြတယျလို့ လသေံ ပဈထားသူပါ။ ရီးရဲက အပွောငျးအရှမှေ့ာ ကစား သမားသဈ အမွောကျအမွား ချေါယူဖို့ရှိလို့ အစ်စကိုဟာ ပုံမှနျ နရောရဖို့ မသခြော တော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဂြူဗငျတပျ အသငျးအနနေဲ့ ရီးရဲ လိုခငျြတဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေး သာပေးမယျဆိုရငျ အစ်စကိုကို ရနိုငျပါတယျ။
၃. မာဆယျလို ။
မီဒီယာ တှထေကျမှာ စီရျောနယျဒို ကိုယျတိုငျ ချေါယူပေးဖို့ လူသိရှငျကွား တောငျးဆိုထားတဲ့ ကစားသမားပါ။ စီရျောနယျဒိုနဲ့ မာဆယျလိုကွားက ဆကျဆံ ရေးကတော့ ပွောစရာ မလိုအောငျ အားလုံး သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ မာဆယျလိုက လကျရှိရီးရဲရဲ့ အခွအေနကေို ငွီးငှေ့ စပွုနပွေီဖွဈလို့လညျး သတငျးတှေ ထှကျပျေါ နပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မာဆယျလို တဈယကျေ စီရျောနယျဒိုရှိ ရာတူရငျကို လိုကျလာမလား ဆိုတာကတော့ စိတျဝငျစား စရာပါပဲ။
ဒီကစားသမား (၃) ယောကျစလုံးက စိရျောနယျဒိုရဲ့ အထာကို ကောငျးကောငျးသိပွီး စီရျောယျဒိုနဲ့ အတှဲညီတဲ့ ကစားသမား တှပေါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီကစားသမား တှကေိုသာ ချေါနိုငျလိုကျ မယျဆိုရငျ ဂြူဗငျတပျ အသငျးနဲ့ မြှျောမှနျးထားတဲ့ အောငျမွငျ မှုတှကေို ရယူနိုငျဖို့ အလား အလာ ကောငျးနပေါတယျ။